Ọrụ Ndịozi 20 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
20 Mgbe oké ụzụ ahụ dajụrụ, Pọl ziri ozi ka a kpọọ ndị ahụ na-eso ụzọ Jizọs. Mgbe ọ gbasịrị ha ume ma gwa ha ka ha nọrọ nke ọma,+ ọ gawara Masedonia.+ 2 Mgbe ọ gafesịrị ebe ndị ahụ ma kwuo ọtụtụ okwu+ iji gbaa ndị nọ n’ebe ahụ ume, ọ batara Gris. 3 Mgbe ọ nọrọ ọnwa atọ n’ebe ahụ, o kpebiri isi na Masedonia laghachi, n’ihi na ndị Juu kpaara ya nkata+ mgbe ọ nọ na-achọ iso ụgbọ mmiri gawa Siria. 4 Ndị so ya bụ Sọpata+ nwa Pirọs nke Beria, Arịstakọs+ na Sekọndọs bụ́ ndị Tesalonaịka, na Geyọs onye Dabe, na Timoti,+ na Tikikọs+ na Trọfimọs+ ndị si n’ógbè Eshia. 5 Ndị a gawara ma chere anyị na Troas.+ 6 Ma mgbe ụbọchị ememme achịcha na-ekoghị eko gasịrị,+ anyị banyere n’ụgbọ mmiri na Filipaị wee gawa. Anyị wee gakwuru ha na Troas+ n’ime ụbọchị ise; anyị nọkwara ụbọchị asaa n’ebe ahụ. 7 N’ụbọchị mbụ+ n’izu, mgbe anyị zukọtara iri nri, Pọl malitere ịgwa ha okwu, ebe ọ bụ na ọ ga-apụ n’echi ya; o kwugidere okwu ruo etiti abalị. 8 N’ihi ya, e nwere ọtụtụ oriọna n’ọnụ ụlọ dị n’elu+ ebe anyị zukọrọ. 9 Otu nwa okorobịa aha ya bụ Yutikọs nọ ọdụ na windo, oké ụra wee buru ya mgbe Pọl nọ na-ekwu okwu. Ụra buturu ya, o wee si n’okpukpu ụlọ nke atọ* daa, e wee bulite ya n’ozu. 10 Ma Pọl gbadara n’ala, dakwasị ya,+ makụọ ya wee sị: “Kwụsịnụ ime mkpọtụ, n’ihi na ọ dịla ndụ.”*+ 11 O wee gbagoro n’elu ma were nri rie, mgbe ya na ha kparịtasịrị ụka ruo oge dịtụ anya, ruo mgbe chi bọrọ, o mesịrị pụọ. 12 Ya mere, ha kpọọrọ nwa okoro ahụ ná ndụ pụọ, a kasikwara ha obi n’ụzọ na-enweghị atụ. 13 Ma anyị buuru ụzọ gawa n’ebe ụgbọ mmiri dị wee soro ụgbọ ahụ gawa Asọs, bụ́ ebe anyị bu n’uche ibute Pọl, n’ihi na, mgbe o nyesịrị ntụziaka banyere nke a, ya onwe ya bu n’uche iji ụkwụ gawa. 14 Ya mere, mgbe ọ bịakwutere anyị n’Asọs, anyị buuru ya gawa Mitilini. 15 N’ụbọchị sochiri ya, anyị si n’ebe ahụ soro ụgbọ mmiri gawa, anyị bịarutere ebe chere Kiọs ihu. Ma n’echi ya, anyị kwụsịtụrụ na Semọs, nwanne echi ya, anyị bịarutere Maịlitọs. 16 N’ihi na Pọl ekpebiwo iso ụgbọ mmiri gafere n’Efesọs,+ ka o wee ghara igbu oge n’ógbè Eshia; n’ihi na ọ na-eme ngwa ngwa ka ọ garuo Jeruselem+ n’ụbọchị ememme Pentikọst ma ò kwe ya mee. 17 Otú ọ dị, o si na Maịlitọs ziga ozi n’Efesọs ma kpọọ ndị okenye+ ọgbakọ ahụ. 18 Mgbe ha bịakwutere ya, ọ sịrị ha: “Unu maara nke ọma otú mụ na unu si nọrọ n’oge ahụ dum,+ malite n’ụbọchị mbụ m batara n’ógbè Eshia,+ 19 eji m oké ịdị nwayọọ n’obi+ na anya mmiri na-agbara Onyenwe anyị ohu+ n’ime ọnwụnwa ndị dakwasịrị m n’ihi nkata ndị Juu kpara;+ 20 ebe m na-alaghị azụ ịgwa unu nke ọ bụla n’ime ihe ndị bara uru ma ọ bụ izi+ unu ihe n’ihu ọha nakwa site n’ụlọ ruo n’ụlọ.+ 21 Kama, agbasiiri m ma ndị Juu ma ndị Grik àmà+ ike banyere nchegharị+ n’ebe Chineke nọ na okwukwe n’Onyenwe anyị Jizọs. 22 Ma ugbu a, lee! ana m eje Jeruselem, n’ihi na mmụọ nsọ+ na-akpali m ime otú ahụ, ọ bụ ezie na amaghị m ihe ga-eme m n’ebe ahụ, 23 ọ gwụla na site n’obodo ruo n’obodo, mmụọ nsọ+ na-agbara m àmà ugboro ugboro, na-ekwu na agbụ na mkpagbu na-echere m.+ 24 Ka o sina dị, ọ dịghị ihe m ji mkpụrụ obi m kpọrọ,+ ma ọ bụrụhaala na m ga-agbacha ọsọ m+ ma jezuo ozi+ ahụ m natara n’aka+ Onyenwe anyị Jizọs, ya bụ, ịgbasi àmà ike banyere ozi ọma nke obiọma Chineke nke na-erughịrị mmadụ.+ 25 “Ugbu a, lee! amaara m na unu niile bụ́ ndị m kwusaara alaeze ahụ agaghị ahụ ihu m ọzọ. 26 N’ihi ya, akpọrọ m unu ka unu gbaa akaebe n’ụbọchị taa na aka m dị ọcha n’ebe ọbara+ mmadụ niile dị, 27 n’ihi na ahapụghị m ịgwa unu nzube+ niile nke Chineke. 28 Na-elezinụ+ onwe unu+ na ìgwè atụrụ+ ahụ dum anya, nke mmụọ nsọ họpụtara unu ka unu bụrụ ndị na-elekọta ya,+ ka unu na-azụ ọgbakọ Chineke dị ka atụrụ,+ nke o ji ọbara+ Ọkpara ya zụta. 29 Amaara m na mgbe m pụsịrị, anụ ọhịa wolf+ ndị obi tara mmiri ga-abata n’etiti unu, ha agaghịkwa emere ìgwè atụrụ ahụ ebere, 30 ndị ikom ga-esikwa n’etiti unu onwe unu bilie, na-ekwu ihe gbagọrọ agbagọ+ iji dọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs ka ha sowe ha.+ 31 “N’ihi ya, mụrụnụ anya, burukwanụ n’uche na kemgbe afọ atọ,+ abalị na ehihie, akwụsịghị m iji anya mmiri na-adụ onye ọ bụla n’ime unu ọdụ.+ 32 Ugbu a, ana m enyefe unu n’aka Chineke+ nakwa n’ozi nke obiọma ya na-erughịrị mmadụ, bụ́ ozi nke pụrụ iwuli unu elu,+ nyekwa unu ihe nketa ahụ n’etiti ndị niile e doro nsọ.+ 33 Ọ dịghị onye m nwere anyaukwu n’ebe ọlaọcha ya ma ọ bụ ọlaedo ya ma ọ bụ uwe ya dị.+ 34 Unu onwe unu maara na aka m ndị a gbooro m mkpa+ m nakwa nke ndị mụ na ha nọ. 35 Egosiwo m unu n’ihe niile na site n’ịdọgbu onwe unu n’ọrụ+ otú a, unu aghaghị inyere ndị na-adịghị ike aka,+ unu aghaghịkwa iburu okwu Onyenwe anyị Jizọs n’uche, mgbe ya onwe ya sịrị, ‘A na-enweta obi ụtọ ka ukwuu n’inye ihe+ karịa ka a na-enweta n’ịnara ihe.’” 36 Mgbe o kwuru ihe ndị a, o gburu ikpere n’ala,+ ya na ha niile, wee kpee ekpere. 37 N’ezie, ha niile malitere ịkwa ákwá nke ukwuu, ha dakwasịkwara Pọl n’olu+ ma jiri nwayọọ susuo ya ọnụ,+ 38 n’ihi na okwu ahụ o kwuru wutere ha karịsịa, ya bụ, na ha agaghị ịhụ ihu ya ọzọ.+ Ha wee duruo+ ya n’ụgbọ mmiri.
^ Otú e si dee ya n’asụsụ Grik bụ “mkpụrụ obi ya di n’ime ya.”